आकासमा बादल देख्ने बित्तिकै सेफ्टीट्याङ्की खोल्नेलाई कारबाही गर | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
आकासमा बादल देख्ने बित्तिकै सेफ्टीट्याङ्की खोल्नेलाई कारबाही गर
Published On : १ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०८:५१
गोरखा बजार ऐतिहासिक, पर्यटकीय तथा धार्मिक नगरी हो । औसत अरु जिल्ला भन्दा गोरखामा आन्तरिक, बाह्य पर्यटक बढि नै आउँछन् । गोरखा सुन्दर पनि छ । गोरखाका बारेमा बिभिन्न कक्षाको पाठ्यक्रम मा पनि पढाइ हुने गरेको छ । त्यसैले देशभरका विद्यार्थीहरु पनि गोरखा आइपुग्छन् ।
तर गोरखा बजारका केही दुर्गुण छन् । गोरखा बजारका प्राय घरमा सेफ्टी ट्याङ्की छैनन् । ट्वाइलेटको निकास सिधै सडक नालीमा जोडिएको छ । कतिपय घरमा सेफ्टीट्याङ्की त छन्, तिनको निकास नालीमा छ । जब आकामा बादल लाग्छ, सिमसिम पानी पर्न थाल्छ अनि सेफ्टीट्याङ्कीको गेटभल्भ खोलिदिन्छन् र नालीमा मिसाइदिन्छन् । अनि सुरु हुन्छ, बजार दुर्गन्धित हुन ।
यो समस्या नयाँ होइन । यस बारे जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रशासन सबै जानकार छन् । केही बर्षअघि यसमा कडाइ गरिएको पनि थियो तर अहिले पनि अबस्था ज्यूँका त्यूँ छ । नगर सुन्दर बनाउने लक्ष्य राखेको नगरपालिका कार्यालयले पुन एकपटक गोरखा बजार प्रदुषित हुनबाट जोगाउन पहल थाल्नु पर्छ । कसको सेफ्टीट्याङ्कीको निकास नालीमा जोडिएको छ ? पहिल्याएर उनीहरुलाई बिभिन्न बाध्यकारी प्रबधान बनाएर त्यस्ता कार्य रोक्न पहल गर्नुपर्छ । सुन्दर सहर सबैको चाहना हो । प्रदुषित गर्नेलाई कारबाही गर्न चुक्नुहुदैन ।